4 ịmata ihe banyere oke mmiri | Netwọk Mgbasa Ozi
4 ịmata ihe banyere oke mmiri ozuzo
Enwere m mmasị na ebili mmiri. Ha nwere ike ịbụ ihe jọgburu onwe ya, mana echeghị m na ị ga-atụ ha egwu, ma kwanyere ya ugwu. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-adị njikere ịghọta ha, na-amụ ha, nke ga-enyere anyị aka ịkọ amụma ha n'ụzọ ziri ezi karị, na-ezere ọdachi ga-esi na ya pụta.
Ihe omuma ndi a bu ihe ndi ozo, dika Twister ma obu Anya nke oke mmiri. Ma gịnị ka ị maara banyere ha? Lee ị nwere 4 ịmata ihe banyere oke mmiri ozuzo na, n'aka, iju gi.
1 1. - United States, ebe ebe oke ikuku oke ikuku kacha emebi
2 2.- 500km / h, ọsọ dị egwu nke oke ifufe
3 3.Tornadoes na-eme njem mgbe ụfọdụ na otu
4 4.- Eledala ike nke a tonado
1. - United States, ebe ebe oke ikuku oke ikuku kacha emebi
Na mpaghara a nke ụwa oke mmiri ozuzo na-ahụkarị n'oge ọnwa mmiri (Eprel-Mee). E mepụtara ọtụtụ nke na ekwenyere na ya A na-etolite 75% n’ime ha ebe ahụ, kpọmkwem na Tornado Corridor, nke bụ mpaghara nke gụnyere akụkụ nke Texas, Oklahoma, Kansas na Nebraska.
Ebee ka ụyọkọ oké osimiri 25% fọdụrụnụ ga-esi? N’ụwa nile ewezuga Antarctica.
2.- 500km / h, ọsọ dị egwu nke oke ifufe
A na-eme ikuku kachasị ike n'ime oke ikuku. Enweghi ike ịtụ ya n'ụzọ ziri ezi, mana enwere ike ịme atụmatụ. Ya mere, enwere ike ịmata na ikuku sitere na oke ifufe nke hibere na Oklahoma na 1999 buuru ọsọ dị egwu nke 500km / awa.
3.Tornadoes na-eme njem mgbe ụfọdụ na otu
Ọ bụ ihe a maara dịka »Wave of tornadoes» ma ọ bụ Tornado Outbreak na Bekee. Na United States ha nwere ike ịmepụta otu dị iche iche 24, ọ bụ ezie na ihe nkịtị bụ na ha sitere na 6 ruo 10.
4.- Eledala ike nke a tonado
Dịka ị hụrụ ihe ịtụnanya ndị a n'anya, ọ bụrụ na ịgaghị eji ụgbọala kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ịnweghị ezi ihe ọmụma, ịkwesighi ịbịaru nso. Ihe kachasị mma bụ ịnọ ogologo oge karịa 2km. Buru n’uche oge niile oke ifufe, ọ bụrụ na ha siri ike dịka nke F4 ma ọ bụ F5, ​​nwere ike ịgbawa nnukwu ụgbọala, ụgbọ ala, bibie ụlọ, ma gbanye osisi.
Kedu ihe ị chere gbasara oke ebili mmiri? Na-amasị ha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » 4 ịmata ihe banyere oke mmiri ozuzo
Foto dị egwu nke ụgbọ elu si na ụgbọ elu